FJKM Antseranana Fahazavana (SP 18) – FJKM
Ao anatin’ny SP Faritany Voalohany Antseranana ( ny Prezida Synodaly dia Pasteur RABEVITA Saina) no misy ny FJKM Antseranana Fahazavana. Miorina eto amin’ny Fokontany AVENIR, Rue Francois de Mahy, Diego. Isan’ny trano Fiangonana voalohany taty Antsiranana izy ary misy fifandraisany lehibe amin’ny tantaran’ny fahatongavan’ny misionera taty amin’ny faritra avaratra. Tamin’ny 1886 no niorina voalohany taty avaratra tao AMBAVAHIBE Distrikan’ny Diego II ny Fiangonana LMS. Nifanindrana tamin’io daty io, 1886, ny kominiona voalohany tao amin’ny Katolika teto Antsiranana ka niteraka tsy fifankazahoana teo amin’ny samy kristianina.
Ireo Missionary tao amin’ny Fiangonana Ambavahibe no nanorina ny Fiangonana Protestanta tamin’ny taona 1912 nanaovana ny vato fototra, ny taona 1913 ny fanokanana. Niray tamin’ny MPF izy tamin’izany, izay lasa FJKM tamin’ny 1968. Pasteur RAKOTOZAFY no nanome ny anarana hoe FJKM ANTSERANANA. Ny Antseranana dia midika toeran’ny serasera, izany hoe ny Fiangonana FJKM ANTSERANANA dia ifamezivezen’ny olona maro. Fa ny hoe ANTSIRANANA tanàna indray kosa dia ilay tsy fitovian’olona mifamezivezy teto Diego. Pasteur RANDRIANARSON Gilbert no nanova ny anarana hoe FJKM ANTSERANANA FAHAZAVANA.
Nanana Sekoly Misionera izy tany aloha, izay niorina teo akaikin’ny trano Fiangonana, ary isan’ireo Missionera nampianatra tao Andriamatoa ALBERT Zakariasy talohan’ny naha Mpitandrina azy. Marihina fa anisan’ireo mpianatra tamin’izany fotoana izany i Pasteur SOLOHERY Paul. Ampiasain’ny SAF nanaovana dispansera ISALAMA izy ankehitriny satria efa nahavita Sekoly FJKM Taninketsa.
Ny taona 1957 no nananganana komity hanorina Sekoly Taninketsa sy hanorina trano Fiangonana vaovao teny TANAMBAO. Pasteur RAKOTOSON no nanao ny vato fehizoro. Ny taona 1963 no nanokafana azy tamin’ny andron’i DAODO avy any Amerika nitondra fanasitranana ary nitoby tato ANTSERANANA ka tsy tandry ny FIANGONANA ka nosokafana ny Tanambao. Ny taona 1964 no nahazo Mpitandrina Pasteur SAMUEL Fanony ny FJKM Tanambao. Mbola ny FJKM Antseranana ihany no nanao ny Kilasy mandry ao amin’ny Sekoly FJKM Taniketsa.
Ireo Mpitandrina nifandimby :
RABEMANAHAKA Jean Williberton (1947-1952)
RABENANDRASANA Gilbert (1952-1953)
RANDRIANARISON Gilbert (1995-2003)
ANDRIANAIVO Maminjaka Lalaina (2003-2016)
ANDRIAFARANTAFIKA Raobiarizafy (2016- )
Rehefa misy fihaonambe aty Antsiranana, amin’ny ankapobeny, dia eto amin’ny FJKM Antseranana Fahazavana no mandray azy.
Manana tany mirefy eo amin’ny 39ha izy ary 11ha amin’izany no tanimbary. Tamin’ny andron’ny Pasteur RAKOTOZAFY no nahazoana izany tany izany.
Tamin’ny andron’ny Pasteur ANDRIANAIVO Maminjaka Lalaina dia lasa Fiangonana Mpanampy voalohany izy. Ankehitriny dia miahy toerana 3 izy hanaovana Tafika Masina sady hanorenana trano fiangonana : SAHARENANA (andalam-panaovana), MANGAOKA (eo am-pikasana), AMPASINDAVA (efa misy vonjimaika). Mampiasa ny Radio Aina Fahazavana FM 103.
Tany Antseranana no nandray ny Recyclage Pastoral sy ny fanokafana ny faha-50 taona ny FJKM ary faha 200 taonan’ny nidiran’ny Filazantsara teto Madagasikara. Mirary ny fahatongavanareo maro aty Antseranana (eo ho eo amin’ny 1100km miala ao Antananarivo).